स्थायी शिक्षा केन्द्र भनेको के हो ? | गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 20/11/2021 23:48 | प्रशिक्षण
स्थायी शिक्षा केन्द्र भनेको के हो र यसको काम के हो? समाज ठूलो गतिमा परिवर्तन र विकास हुन्छ। फलस्वरूप, यस रूपान्तरणले श्रम बजारमा नयाँ आवश्यकताहरू पनि सिर्जना गर्दछ जुन प्रविधिको उदयबाट प्रमाणित हुन्छ। फलस्वरूप, नयाँ पेशाहरूको माग उठ्छ। अर्कोतर्फ, सबै कामदारहरूले नयाँ रोजगारी विकास लक्ष्यहरू सेट गर्न सक्छन् जुन सिधै शिक्षासँग जोडिएको हुन्छ । निरन्तर प्रशिक्षण सबैका लागि निरन्तर चुनौती बन्छ।
तसर्थ, यो एक मार्ग हो जुन तपाईले वर्षको अन्तिम खण्डमा उपलब्धिहरूलाई सन्तुलनमा राख्न परिप्रेक्ष्यमा राख्न सक्नुहुन्छ। र, अर्कोतर्फ, तपाईंले २०२२ मा नयाँ क्षमता र सीपहरू प्राप्त गर्ने ढाँचासँग सम्बन्धित अर्को उद्देश्यहरू पनि परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। स्थायी शिक्षाअवधारणा आफैले संकेत गरे जस्तै, यो एक आवश्यक उद्देश्य हाइलाइट गर्दछ। अस्तित्वको विभिन्न चरणहरूमा ज्ञानसँग सम्पर्क खुवाउने।
1 समान अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रहरू
2 रिजुमे अपडेट गर्नुहोस् र आवरण पत्र सुधार गर्नुहोस्
समान अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रहरू
त्यहाँ विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन् जुन पेशेवरहरू मिलेर बनेका छन् जसले विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सुधार प्रक्रियामा साथ दिन्छन्। आजीवन सिकाइको सुदृढीकरणसँग पङ्क्तिबद्ध गरिएका ठाउँहरू वयस्कहरूका लागि लक्षित छन् जो आफ्नो क्यारियरमा विकास र अगाडि बढ्न चाहन्छन्। र, यसका लागि, ज्ञानको विस्तारको माध्यमबाट नयाँ ढोका खोल्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूको रोजगारी स्तर सुधार गर्न विशेष पाठ्यक्रमहरू सिकाइन्छ। डिग्रीहरूले तपाईंलाई पाठ्यक्रम विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ र यसैले, नयाँ जागिरहरूको लागि आवेदन दिन कभर पत्र।
त्यहाँ धेरै पेशेवरहरू छन् जो वयस्कतामा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन् जुन उनीहरूले कुनै कारणले विगतमा पेन्डिङ छोडेका थिए। अरूहरू एक समयमा हुन्छन् जब उनीहरूले नयाँ अवसरहरू पत्ता लगाउन आफ्नो क्यारियरलाई पुन: आविष्कार गर्न आवश्यक छ। वर्तमान अवधि, वास्तवमा, अनिश्चितता र अस्थिरताको भावनाले चिन्ह लगाइएको छ। श्रम बजारमा समान अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न आधारभूत तालिमको अधिग्रहण महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा औंल्याउनुपर्छ। तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, चयन प्रक्रियाका सर्तहरू धेरै माग गर्न सकिन्छ। र तपाईं सक्नुहुन्छ जागिरको स्थितिको लागि उम्मेद्वारको रूपमा आवेदन गर्नका लागि आवश्यकताहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। तालिम भनेको कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने काम पूरा गर्नका लागि चाहिने विशेषताहरू भएको प्रोफाइल चयन गर्न प्रयोग गरिने मापदण्डहरू मध्ये एक हो।
मानिसको व्यावसायिक जीवनलाई शैक्षिक अनुभवसँग जोड्न सकिन्छ। आधारभूत तालिम एउटा ढोका हो जसले सिकाइ मार्ग खोल्छ जसले अन्य सान्दर्भिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, उच्च डिग्री प्राप्त गर्नुहोस्। स्थायी प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन् विशेष स्थानहरू जुन बहु-अनुशासनात्मक टोलीद्वारा एकीकृत छन्। आजको समाजमा नयाँ प्रविधिहरू सिक्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, वास्तवमा, इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणहरू काम खोज्न आवश्यक छन्। यस कारणले गर्दा, उल्लेखित केन्द्रहरूले यस मुद्दालाई ठाउँ दिन्छ।
रिजुमे अपडेट गर्नुहोस् र आवरण पत्र सुधार गर्नुहोस्
निरन्तर शिक्षा केन्द्र के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ? यो नयाँ अवसरहरूको ठाउँ हो जसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन्छ र जिज्ञासालाई बढाउँछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोगी वातावरण। शिक्षकहरूले वयस्क प्रशिक्षणको रूपरेखा भित्र विशेष पाठ्यक्रमहरू सिकाउँछन्। स्थायी शिक्षा केन्द्रहरूले आमनेसामने कार्यशाला मात्र दिँदैनन्। अनलाइन प्रस्तावले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै घर मार्फत आफ्नो तयारी विस्तार गर्न आवश्यक लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
आज उल्लेख गरिएका केन्द्रहरूको भाग हो कि यात्रा कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित फाइदाहरू के हुन्? तिनीहरूले आफ्नो पुन: सुरुवात अपडेट गर्न चाहने मानिसहरूका लागि गुणस्तरीय स्रोतहरू प्रदान गर्छन्। एक प्रशिक्षण जसले अघिल्लो ट्र्याजेक्टोरीलाई पनि पूरक गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » स्थायी शिक्षा केन्द्र भनेको के हो ?